မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 2012 Best Korean Drama Lists - Part2(Based on my liking)
Posted by mabaydar at 5:37 PM
yati maung said...
တို့လည်း park yoo chan ကိုကြိုက်တယ်.ဘယ်လိုပဲသရုပ်ဆောင်၂.
The moon ကို ကြည့်တော့ကြည့်တယ် ပြီးသေးဘူး မင်းသမီးက အသက်ကြီးနေတယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲကဖျောက်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် Miss you ကတော့မကြည့်ရသေးဘူး micky yoochan ကို sungkyunkwan နဲ့ Rooftop Prince ဆိုရင်ချက်ချင်းဆိုပေမဲ့ Muss ripley တုန်းကလည်းမင်းသမီးဇာတ်ကနာလို့ (အမှန်တော့သု့ ကို ဂျိုဆန်ခေတ် မင်းသားပုံစံကိုဘဲ ကြိုက်နေတာ ဟီးး) Wild romance ထဲက မင်းသမီးကို တခြားကားကြိုက်တယ် ဒီထဲမှာတော့ ယေင်္ကျားလျာဆိုပေမဲ့ မိန်းကလေးပုံစံ လုပ်လည်း ဆွဲဆောင်မှု့ မရှိသလိုဘဲ gentleman ကိုတော့ ဇာတ်လမ်းကိုမကြိုက်ဘူး ပြချင်တာတွေများပြီး ရစ်နေတယ်လို့ ခံစားရတယ် နောက်ဆုံးကတော့The moon ကို အစကနေ ပြန်ကြည့်တော့မယ်
4/26/2013 9:20 PM
၄။ ဇတ်လမ်းတောင်မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေပြီ။ လာနေတုန်းကတော့ စွဲစွဲမြဲမြဲ စောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်။
၅။ အဆုံးထိ မကြည့်ဖြစ်။ Yoo Chun ကတော့ သူခေါင်းဆောင်တဲ့ ကားတိုင်းလိုလို ပေါက်တယ်နော်.. စန်းပဲ ထင်တယ်။ SKKS ထဲက မင်းသားတွေရော မင်းသမီးရော နောက်ကားတွေမှာ ဆက်အောင်မြင်နေတာမြင်တော့ ဝမ်းသာတယ်။ Yoo Ah In က Fashion King မှာလည်းသရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်။ ဒါမယ့် အဲ့ကားက သိပ်မအောင်မြင်လိုက်ဘူး။ ခု သူ့ကား Jan Ok Jung ကတော့ လူကြိုက်များတယ် Kim Tae Hee ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်။
၇။ JDG ကြောင့်ကြည်ဖြစ်တာ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရီရတဲ့ကားလေး။ သဘောကျတယ်။
4/26/2013 9:44 PM
မင်းသမီး ထဲ မှာ Lee Si Young က ကြိုက်ဆုံး List မှာပါ တယ်။ Wild Romance မှာ ဒီလောက် မလှအောင်လုပ်ထားတာတောင် ချစ်စရာကောင်းတုန်းပဲ။ အိုက်တင်လဲ မပိုဘူး Tomboy လိုလုပ်ထားပင်မဲ့။ Micky Yoo Chun ကတော့ မကြိုက်တဲ့ List မှာ ပါတယ်။ I Miss U မှာ သူမဟုတ် ပဲ Kim Soo Hyun သာ ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။
4/27/2013 2:41 PM
The Moon that Embrace the Sun ကို ကြည့်ကြည့်မှပဲ။ မဗေဒါ review ကိုဖတ်ကြည့် ပြီး စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ :D
4/29/2013 9:36 AM
နံပါတ် ၃ ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ တပတ်ပြီးတပတ် စောင့်ကြည့်ရတဲ့ ပထမဆုံးကားပါပဲ... မျက်ရစ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ မင်းသားကို အရမ်းသဘောကျတယ်.. သူ ငိုရင် ကိုယ်ပါလိုက်ငိုမိတဲ့အထိ :P
နံပါတ် ၇ ကတော့ တကယ့်ကို မင်းသား ဂျန်ဒေါင်ဂန်းကို ချစ်လွန်းလို့ ကြည့်မိပြီးမှ သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ တဦးအပေါ်ထားတဲ့ တဦးရဲ့ အကြင်နာ မေတ္တာကို သိပ်သဘောကျတာပဲ..မင်းသမီးတွေ သရုပ်ဆောင်တာ နည်းနည်း over acting တွေ ဖြစ်နေတာကလွဲလို့ အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းလေးယောက်ရဲ့ မိန်းမလှလှလေးတွေ မြင်ရင် ပိုးတဲ့ပန်းတဲ့ပုံစံကို သိပ်သဘောကျတာ..
မဗေဒါရဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းအညွန်းလေးတွေ လာလာဖတ် ပြီးရင် အဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေကို ရှာဖွေပြီးတော့ ပြန်ကြည့်ပါတယ်.. ကျေးဇူးလဲ တင်တယ် သိလား.. အခု ညွှန်းထားတဲ့ ကားလေးတွေ ကြည့်ကြည့်ဦးမယ်.. :D
4/29/2013 1:20 PM
Hi Mabaydar,Could you please share the link where I can watch Korea Drama ?I used to go to dramasub.com and now not available.Thank you in advance :P
I Miss You တစ်ကားပဲ မကြည့်ရသေးဘူး မီကတော့ The Moon that Embrace the Sun ကို Kim Soo Hyun ကြောင့် ကြည့်ဖြစ်တာ...သူ့ကို Dream High ကတည်းက အရမ်း ကြိုက်စ်
Try checking out at www.dramacrazy.net , www.gooddrama.net and www.epdrama.net .
And Thanks for the drama so..so list also..
5/09/2013 1:39 PM
5/09/2013 1:40 PM
မဗေဒါ ညွှန်းလို့ The Moon that Embrace the Sun ကို ခုတလောမှကြည့်လိုက်တာ ပြီးသွားပြီ။ Kim Soo Hyun ကို ကြိုက်သွားတယ်။ သူ ဘုရင် သရုပ်ဆောင်တာ charming ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အဲဒီ့ကားကို စထွက်ကတည်း recommend လုပ်တာ မင်းသမီးက ကိုယ့် favorite မဟုတ်သလို မင်းသားထက် အသက်ကြီးနေလို့ မကြည့်ပဲထားထားခဲ့တာ။
Joo Won ကို Baker King တုန်းက ကြိုက်တယ်။ သူလူဆိုး သရုပ်ဆောင်တာကို သဘောကျတယ်။ ပထမမင်းသား Tak Gu ကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်2days 1 night (Season 2) မှာ JW ပါကတည်းက သူကို ဆက်ကြိုက်လို့မရတော့ဘူး။ သူခေါင်းဆောင်လုပ်ရတဲ့ နောက်ကားတွေကလည်း မင်းသမီးတွေက စိတ်ပျက်စရာ။ 7th Grade Civil Servant ဆို အဆိုးဆုံး။ ChanSung ကိုကြိုက်တယ်။ မင်းသမီးကို သည်းငြီးဆက်မခံနိုင်လို့ အဆုံးထိမကြည့်တော့ဘူး။ အဲဒီ့မင်းသမီး သရုပ်ဆောင်တာကို မကြိုက်ဘူး။ သူလည်း Lee Min Jung လိုပဲ။ အစတုန်းကတော့ မဆိုးပါဘူး။ နောက်တော့ overacting တွေဖြစ်လာသလိုပဲ။
Seung Gi ကတော့ favorite always ပဲ။ သူကိုကျတော့2days 1 night (Season 1) ကြောင့်ပိုကြိုက်တာ။ Drama ထဲမှာထက် variety shows တွေမှာ သူ့ကိုပိုကြိုက်တယ်။ သူ သီချင်းဆိုတာလည်းကြိုက်တယ်။ King two hearts မှာ မင်းသမီးအသံက over ဖြစ်နေလို့ ဆက်ကြည့်နိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့ ၄ ပိုင်းနဲ့ရပ်လိုက်ရတယ်။
Gentleman’s dignity ကို လူတော်တော်များများက ကောင်းတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် JDG မျက်နှာကြီးက တအားပိန်အောင် လုပ်ထားလို့လား မသိဘူး။ ပါးချောင်နားချောင် အတော်ကျနေတယ်။ သူကိုလည်း ၉ပိုင်းနဲ့ရပ်ပစ်လိုက်တယ်။
I miss you ကိုလည်းမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ စိတ်ဆင်းရဲစရာနဲ့ ဇာတ်ကိုစပြီး ဇာတ်နာထားလို့။
Fashion King ထဲမှာ Yoo Ah In က ဒုတိယမင်းသားလောက်တော့ နေရာမရသလိုပဲ။ သူ့ character ကို ပိုကြိုက်ရမယ့်အစား ဒုတိယမင်းသား character က ပို cool ဖြစ်နေတယ်။ ဒုတိယမင်းသားကို ကြိုက်သွားလို့ အဆုံးထိကြည့်တာ။ အဲဒီ့ကားထဲက မင်းသမီးက ကိုရီးယားမနဲ့မတူဘူး။ တရုတ်မနဲ့ ပိုတူတယ်။ အွန်ဆောအငယ်မ ရဲ့ Little bride ထဲမှာ သူကမင်းသမီးရဲ့အနီးကပ်သူငယ်ချင်းလေ။ အွန်စောအငယ်မကားကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။ သူ့ act cute က အခုနောက်ပိုင်းကားတွေမှာ အတော်ပိုလာတယ်။ JGS နဲ့ကားမှာလည်း အဲလိုပဲ။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ကျလိကျလိနဲ့ နှစ်ယောက်စလုံးကို မုန်းလာတာ။
Drama King ကိုလည်း တ၀က်တပျက်နဲ့ရပ်လိုက်တယ်လေ။ မင်းသားက မင်းသမီးနဲ့ အချစ်ခန်းမစခင်တုန်းက ကောင်းသေးတယ်။ အချစ်ခန်းလည်းစရော သူမျက်နှာကြီး ကို ခံစားလို့ကိုမရတော့ဘူး။ တချို့သရုပ်ဆောင်တွေက အသက်ကြီးလာရင် အချစ်ကား သရုပ်မဆောင်သင့်တော့ဘူး။ သူတို့မျက်နှာနဲ့ မလိုက်တော့လို့။ တချို့ကျတော့လည်း အသက်ကြီးပေမယ့် မိုက်တယ်။
The တinter that wind blows ကိုတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်။ မင်းသား၊ မင်းသမီး နှစ်ယောက်လုံးက perfect။ Scenes တွေကလည်း ကဗျာလေးကျနေတာပဲ လှတာ။
နိဂုံးချုပ်ရမယ်ဆိုရင် မဗေဒါရဲ့ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးတွေကိုကြိုက်ပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ။ အားပေးနေပါမယ်နော်။ =)